နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၄) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 19, 2014 at 11:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီအပိုင်းမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဆက်စကားပြောတွေမှာ သုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ စကားပြောကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Jim : Who’s the girl next to Barbara?
Charles : That’s Mary Anderson. Didn’t you meet her at Steve’s party?
Jim : No, I wasn’t at Steve’s party.
Charles : Oh! Then let me introduce you to her now…Mary, this is my cousin Jim.
Mary : Hi, Jim. I’m glad to meet you.
Jim : I’m glad to meet you. Can’t we sit down somewhere and talk?
Mary : Sure, let’s sit over there.
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ dialogue မှာ Jim ပြောတဲ့ Who's the girl… မှာ Who's က Who is ကို ခြုံ့ရေးထားတဲ့ contracted form ဖြစ်ပါတယ်။ အသံထွက်ကတော့ Whose /huwz/ နဲ့အတူတူပါဘဲ။
Didn’t you meet her at Steve’s party? ဒီနေရာမှာ negative question ဖြစ်တဲ့ Didn't you…ဆိုတာနဲ့ မေးထားတာ သတိပြုမိလား။ ပုံမှန်အားဖြင့် negative question ကို သုံးတဲ့အခါ အဖြေက affairmative answer တွေဘဲ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ မြန်မာမှာလည်း negative question ရှိတယ်။ ".....မဟုတ်လား?" နဲ့အဆုံးသတ်တယ်။
မေး ။ Haven't you eaten already? (စားပြီးပြီမဟုတ်လား?)
ဖြေ ။ Yes, I have. (ဟုတ်ကဲ့။)
တစ်ခါတစ်လေ ဘာအဖြေမှပေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
Haven't I told you not to touch it?
ဒါကိုမကိုင်ပါနဲ့လို့ငါမပြောထားဘူးလား။ (ဆူပူ အပြစ်တင်သံ)
တစ်ခါတစ်လေလည်း negative answer ဖြစ်နိုင်တယ်။ Jim က ပြန်ဖြေတာကိုကြည့်ပါ။
No, I wasn’t at Steve’s party.
တစ်လက်စတည်း Jim ရဲ့ အဖြေကို စိတ်ထဲကနားထောင်ကြည့်ရအောင်။ ပုံမှန်အားဖြင့် preposition ဖြစ်တဲ့ at ကို အသံပျော့ပျော့ နဲ့ထွက်ရတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီစာကြောင်းမှာ at အပေါ်မှာ အသံပြင်းပြင်း strong stress နဲ့တစ်နည်းအားဖြင့် high point of intonation ကို ထည့်ပြောရတယ်။
"ကျွန်တော်မှ အဲဒီပါတီကို မရောက်ခဲ့တာ။" (အဲဒီ မှာမှ မရှိတာ။) ဆိုတဲ့သဘော ပေါ်လွင်အောင် stress ထည့်ပြောရတာပါ။
အဲဒီမှာ at က present (adj) တို့ there (adv) တို့နဲ့ အဓိပ္ပါယ်တူသွားတာပေါ့။ နောက်တစ်နည်းနဲ့ပြောရရင် "I wasn't present." "I wasn't there." လို့ present တို့there တို့ အပေါ် stress ထည့်ပြောရတယ်။
Mary, this is my cousin Jim.
အဲဒီစကားမှာ Charles က Mary ရဲ့အမည်ကို အရင်ခေါ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ မိတ်ဆက်ခံရသူရဲ့ နာမည်ကို မိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူရဲ့ နာမည် နောက်မှ ပြောရတာက ပိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Charles က Mary ကို Jim နဲ့ မိက်ဆက်ပေးတော့ Mary ရဲ့နာမည်ကို အရင်ခေါ်လိုက်တယ်။ (အကယ်၍များ Jim ကို Mary နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးရင် ဒီလိုပြောဖြစ်မှာပေါ့။
"Jim, this is Mary.")
နောက် Mary ရဲ့ နာမည်ကို ခေါ်တဲ့အခါ အသံကို မြှင့်ပြီးခေါ်ရတယ်။ (အပိုင်း ၃ မှာ လည်းဖော်ပြခဲ့ပြီး)
Hi ကို Hello လည်း အစား informal အနေနဲ့သုးံနိုင်တယ်။ (အပိုင်း ၂ မှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး)
I’m glad to meet you. ကို Mary က အရင် စပြော တယ်။ ပြီးတော့ I’m glad to meet you. လို့ Jim ကလည်း ပြန်ပြောတယ်။ Mary ကပုံမှန်လေသံနဲ့ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ Jim က ပြန်ပြောတဲ့အခါ you ဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ်မှာ အသံကို မြှင့်ပြီးပြောရတယ်။ (အပိုင်း ၁ မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ "How are you?" အကြောင်း ပြန်ဖတ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။)
ဒီ dialogue မှာ ပါတဲ့ အခြားသိမှတ်ဖွယ် ရာတွေကတော့
Can't we sit down…? (informal) = Would you like to sit down…? (formal)
Sure (informal) = Yes, of course, certainly (formal)
စသည်ဖြင့် အခြေအနေအရ ဖလှယ်ပြီးသုံးနိုင်တယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရေးစွမ်းရည် အရေးပါပုံ
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အားကောင်းသော ဝေါဟာရများ
Permalink Reply by Yi Yi Win on September 13, 2015 at 11:12